İmamoğlu wuxuu ku dhawaaqayaa nuqul ka mid ah Waraaqda Channel Istanbul ee lasiiyay Erdoğan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbulİmamoğlu wuxuu ku dhawaaqayaa nuqul ka mid ah Waraaqda Channel-ka ah ee loo diray Istanbul Erdogan
Waxaan u isticmaali doonaa xuquuqdayda inaan dacwoodo
Kaddib warbixintii EIA ee loo diyaariyay Kanal Istanbul, madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu xareeyay rafcaan ah "Meelaha Yurub laga dhisayo ee Yurub 1 / 100.000 Bedelka Qorshaha Deegaanka".
Diidmada ka hor, Imamoglu wuxuu kajawaabay su’aalo badan oo suxufiyiin ka socdey phaeton ilaa habka loo aqbalo ceelasha inay yihiin meelaha cibaadada. İmamoğlu wuxuu Madaxweynaha weydiiyay waxyaabaha ku qoran warqad 4-bog ah oo uu u diray Erdo deliveredan ee Ankara, “Waxaan warqaddeena ku qoray inay jiraan dad doonaya in marinnada u dhexeeya IMM iyo dowladda dhexe la jabiyo, tan waa in la saxaa waana in aan la oggolaan. Ma ahan sida dadka qaarkiis ay wax ugu qoreen wargeyska. Ma doonayo inaan uga hadlo Kanal warqad 4-bog ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharraxo maaddadaas fool ka fool ah. Waxaan doonayaa in ay ka hadlaan fool ka fool, Waxaan doonayaa inaan siiyo warbixin, maanta Istanbul iyo berri, waxaana uu rabay inuu wareejiyo by luqad aad saaxiibtinimo, Istanbul sida Head of Metropolitan, Turkey ee ugu sareeya abid cod xushay tirada duqa wadahadalo kula Madaxweynaha Turkey ee Istanbul Waan gudbinayaa codsigeyga. Go'aanka xiga, go’aanka damiirka iyo dareenka cadaaladda waxaa iska leh Mudane Madaxweyne gebi ahaanba. Jawaabtayda waxaan ku sugayaa si cajiib ah oo qarsoodi ah magaca dadka reer Istanbul, wali jawaab kama helin. ”
Kadib warbixintii EIA ee loo diyaariyay Kanal Istanbul, Ekrem İmamoğlu oo ah Duqa Magaalada Magaalada Metropolitan Municipal (IMM) ayaa sidoo kale codsaday codsi ah "Isbadalka Qorshaha Deegaanka ee Yurub 1 / 100.000 Isbedelka Qorshaha Deegaanka". Kahor inta uusan gudbin rafcaan, Imamoglu wuxuu ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta ee ku saabsan ajandaha hortiisa hortiis agaasimaha guud ee Beşiktaş ee Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka. Su'aalaha la weydiiyay Imamoglu iyo jawaabaha uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
"Waxaan isku dayeynaa in aan ka hortagno khiyaanada Istanbul"
Waxaad u timid inaad rafcaan qaadato waqti ka hor. Markaa waxaad diidday warbixinta EIA. Warbixintaas, in kasta oo ay diidan tahay dhammaan diidmadaas, ayay maanta qaadatay Wasaaradda Deegaanka. Hadda waad joogtaa halkan. Sidee u qiimeyn doontaa maxaadse halkaan maanta u joogtaa? ”
Waad ogtahay, tobanaan kun oo dad ah ayaa codsadey warbixinta EIA. Maanta, Wasaaradda waxay go’aansatay inay aqbasho EIA arintan. Xaqiiqdii, maahan go'aan la yaab leh annaga. Waxaan sii wadaynaa inaan raacno habsocodyada daqiiqadba. Marka hore, sababta horumarka maanta; Waan ka soo horjeedaa qorshayaasha socda. Qorshayaasha 100.000, go'aan ayaa Wasaaradda waxaa u sameysay si ku-meelgaar ah, iyada oo aan loo baahneyn wax wadaag ah, iyada oo aan la qaadin fikradaha qaybaha bulshada, saamileyda arrimaha la xiriira, iyada oo aan laga wada hadlin tabarucaadda maamulka cusub ee Istanbul ee hawsha. Habka isbedelka qorshaha 100.000, ee loogu yeero dastuurka magaalada, qawaaniinta lagu soo rogi karo ee magaalada, ayaa lagu sameeyay qaab ah in la keeno cunno qariban oo la hakiyo. Waxa jira muddo cayrin illaa dhamaadka bishaan oo waxaan soo bandhigi doonaa diidmadeyda qorshahan maanta. Waxaan diidmadayda ku bixin doonaa iyada oo ku xidhan sharciga kalkaaliyaha caafimaad. Waxaan siin doonaa rafcaanka; laakiin halkan kuma dhammayn karno howsha. Warbixinta EIA, bulshada, shaqsiyaadka, IMM, hayadaha kale, ururada aan dowliga aheyn waxay xaq u leeyihiin in ay ka furaan maxkamad qaab dhismeedka sharciga qaran. Anigu shaqsi ahaan waxaan u isticmaali doonaa xaquuqdayda ah inaan maxkamada ka furo arintaan. Waan ogahay inay bulshada u isticmaali doonto heerka ugu sareeya. tus Waxaan dareemayaa in dhamaadka bishaan, in dhamaan dadka reer Istanbul ay sameyn doonaan allabari si ay u gutaan xaqa ay u leeyihin qorshahan. Waxay sidoo kale u imaan doonaan wakiilada Wasaaradda Qorshaynta Magaalooyinka waxayna soo gudbin doonaan diidmadooda. Markaa, nidaamka laxiriira qorshaha, kadib marka howsha hakinta la idleeyo, kadib go'aanka laqaado, waxaa jira hanaan maxkamadeed hadii tani sidoo kale ay tahay mid taban. ilaa iyo dhamaadka wadada sharciga ah, oo la lug weyn leh iyo taageerada Istanbul, kaas oo dhibaato muhiimka ah ee Istanbul taas oo gebi ahaanba la saamayn ku yeelan doona mustaqbalka, ii, fikradda ugu weyn khiyaanay lagu qaban doonaa magaalada Istanbul, (kaas oo la qiyaamay fikradda guud ee Turkey, ajandaha waxaan ku haboon Waad ogtahay cidda fadhida, waad ogtahay yaa yiri 'Waan khiyaanay' laakiin khiyaanadan ayaa ka badan kuwa ay leeyihiin. Waxaan isku dayeynaa inaan ka hortagno khiyaano aan la beddeli karin). Waxaan isku dayeynaa inaan caawinno kuwa iskudaya inay go'aankan gaaraan kana soo celiyaan qaladka weyn. Dhinacyadan, waxay arki doonaan labadaba diidmo iyo geedi socod sharciyeed, dhammaan xuquuqdeena sharciyeed, waxaanan sii wadi doonnaa inaan adeegsano malaayiin qof ilaa dhamaadka.
"WAA INAAN KU JIRO TALADA '
"Waxaa jiray boqolaal diidmo ah oo ay siisay warbixinta EIA ..."
Waxaa jiray tobanaan kun oo diidmo ah, oo aan ahayn boqolaal. Fikradayda, uma maleynaayo inay sameeyeen dadaal ay ku qabanayaan ruuxa shaqada. Waxay ku saabsan tahay meesha aad rabto inaad aado. Hadaad rabto inaad meel la aado bulshada, waxaad maqlaysaa cod kasta oo bulshada ka mid ah. Tani waxay ku saabsan tahay fikradahaagu inay cad yihiin. Waqtigan xaadirka ah, waan ogahay bilowga howsha, waan sameeyaa, hadaad rabto iyo hadii kaleba, waa qaab abuuris. Marka taa la ixtiraamo, kama fekerayo inaan ka tago diidmadaas, inaan baarto, arko iyo dareemo. In kasta oo ay jiraan wax walba, waxaan u maleynayaa in qareenada loo tababaray jaamacadaha dalkan inay ka jawaabi doonaan hanaankan khatarta ah, xitaa nidaamka sharciga ah ee dhibaataysan, iyo inaan difaacno xuquuqdeena sharciga. Waxaan sugayey go'aankaan EIA. Qorshaheyga kuma liito laakiin mar labaad, waxaan rajeynayaa inay jiri doonaan tobanaan kun diidmo ah. Ilaa iyo maanta, dadka iskaa wax u qabso ee Istanbul waxay codsiyadooda u sameyn doonaan haweenka, ragga iyo dhalinyarada halkan halkan ku xusan sharciga jinsiyadda. Laakiin nidaamka sharciga ee ka dambeeya taas waa mid aad muhiim u ah. Waxaan ku sii wadi doonaa tilmaamahayga dareenkaas. Tani waxay u dhigantaa waajibaadka ay i siisay nin xaq ah oo reer Istanbul ah.
“WAA KU SAABSAN GUDDOOMIYAHA HIRSES”
Dhererka qaddarka laga sii deyn doono kiiska 'BB' ee la xiriira marxaladaha ayaa sidoo kale la hadlay. Maxuu yahay xaaladihi ugu dambeeyay ee gawaarida xamuulka? Maxaad ka dhihi laheyd dhaleeceynta ku saabsan lacagtan? ”
Istanbul waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo la isku uruuriyay. Tani waa mid ka mid ah dhibaatooyinka la uruuriyay. Si kale haddii loo dhigo, su'aasha loo yaqaan 'phaeton' ma ahan arrin dhacday shalay illaa maanta. Fayton waa dhaqan sidoo kale dhaqan u ah Jasiiradaha. Aynu hoosta ka xariiqno tan. Taas kama dayno. Sikastaba ha noqotee, howshan, oo si liidata loo maareeyay mudo tobanaan sano ah, waxay gaartay heer aan midkeenna ku habboonayn damiirka qeyb kamid ah bulshada. Nasiib darrose, hanaankan waxaa si xun loogu adeegsaday Jasiiradaha. Tani waxay dhaawacaysaa dadka. Waxaan dadaal ugu jirnay sidii aan xal ugu heli lahayn arrintan muddo bilooyin ah. Waad ka fahmi kartaa macaankeenna iyo qaabkeenna halkan. Hayso arin layaab leh oo quseysa magaalada Istanbul oo dhan, adigoon ka wada hadlin meel fagaare ah, oo hor dhig umadda horteeda 'pat'. Dadaalkeena ku aaddan abaabulista iyo adeegsiga habab dimoqraadi ah runtii waa tusaale. Dhamaadka maalinta; Goobta aan nimid, waxaan sameynay fikrad ah inaan go'aan ka gaarno baarlamaanka meesha aan u nimid inaan go aan wada gaareyno - dabcan, dhacdooyin murugo leh ayaa sidoo kale dhacay. Gawaaridu waxay xaq u leeyihiin wixii la soo dhaafay ilaa waqtigan. Marka maanta heerarkasta waxaa jira qiime suuq. Anaga, qiimaha suuqaan, waa inaan go'aan ka gaarno inaan lagu dhibaateynin dadka ku shaqeysta noloshooda sida shaqaale, waxay ku sameyn doonaan dhammaan howlaha gaadiid ahaan howlahooda gaarka ah, waxay bixin doonaan adeegyo gaadiid sida Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul iyo IETT, Machadkeena wuxuu cadeeyay aragtidiisa ku saabsan in la siiyo TL 250 kun milkiileyaasha gaadiidleyda. Golahayagu wuxuu caddeeyey inay fiicnaan lahayd in la siiyo 300 TL baabuur kasta, go'aanka dhammaan xisbiyada siyaasadeed. Waxaan hadda u socdaa arjigan. Waxaan kaloo leenahay go'aan ku saabsan iibsashada fardaha sidoo kale. Waxaan sidoo kale la kulannaa xafiiska gudoomiyaha, wasaaradda beeraha iyo dadka ay quseyso. Waxaan iskaashi la sameynaa dayactirka iyo howsha kuwaan qeybaha ku habboon ee Wasaaradda Beeraha. Si loo hubiyo in fardo loo qaado halkaas si sax ah, xuquuqda wajiga waxaa la siiyaa iyo nidaamka gaadiid ee cusub wuxuu ku habboon yahay Jasiiradaha, taasi ma wasakheynayso deegaanka, iyo gawaarida korontada iyo sidoo kale gawaarida korantada ee kala duwan marka loo eego dalxiiska ayaa loo qaabeeyey kana qeybqaatay howsha, waxaan diyaar u nahay tartan ku saabsan arrintan. Adeeggu wuxuu sidoo kale bixin doonaa kala-guurkaan ka socda aksatam. Waxaan kaloo ogahay inay jiraan dad badan oo ku nool magaalada Cadala oo aan waxyeello u geysanin ama aan cidna dhaawicin, taasina waxay jeceshahay wejiyada. Waxaan kaloo ogahay inay tani dhaqan tahay. Waxaan sidoo kale dareemayaa, laakiin tani waa waxqabadka aan go'aansannay inaan ku sameyno marxaladan. Aynu la wadaagno dadweynaha.
WAA IN AADAN NAHAY IN AAN SI AAD UBADAN
“Waxaad codsatay inaad la kulanto Madaxweynaha. Waxaad ku siisay warqad. Jawaab baa timid?
Waxaan jeclaan lahaa in jawaab degdeg ah laga helo. Waxaan sidoo kale codsannay shirkii ugu horreeyay ee aannu la yeelano Madaxweynaheenna Ankara, laakiin wuxuu qorsheeyay inuu la kulmo 30 degmo oo magaalo weyn ah. Kulankani wuxuu ahaa midowga midowga degmooyinka. Nasiib darrose, kii hore, kulan lala yeeshay kursi jabay oo aan la garanayn sida uu ku yaal ajendaha, iyo ta labaad, jawiga kulanka aan naxariis lahayn ayaa ajandaha ku jiray. Ma rabno inaan sidan oo kale noqonno. Cadho. Laakiin bal aan idhaahdo sidan; Halkii ay hawshani ku dhici lahayd, waxa ugu waxtarka badan aniga waxay ahayd inaan siiyo warqaddeena afarta bog ah. Waraaqdaydii, waxaan ku qoray inay jiraan dad raba in kanaallada u dhexeeya IMM iyo dowladda dhexe la jabiyo, tan waa in la saxaa waana in aan la oggolaan. Waxaan taabtay arrimaha qaarkood. Ma ahan sida dadka qaarkiis ay wax ugu qoreen wargeyska. Ma doonayo inaan uga hadlo Kanal warqad 4-bog ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan sharraxo maaddadaas fool ka fool ah. Waxaan doonayaa in ay ka hadlaan fool ka fool, Waxaan doonayaa inaan siiyo warbixin, maanta Istanbul iyo berri, waxaana uu rabay inuu wareejiyo by luqad aad saaxiibtinimo, Istanbul sida Head of Metropolitan, Turkey ee ugu sareeya abid cod xushay tirada duqa wadahadalo kula Madaxweynaha Turkey ee Istanbul Waan gudbinayaa codsigeyga. Go'aanka xiga, go’aanka damiirka iyo dareenka cadaaladda waxaa iska leh Mudane Madaxweyne gebi ahaanba. Waxaan sugayaa jawaabteyda si dhugdhug leh oo waadax ah anigoo ku hadlaya magaca dadka reer Istanbul. Weli jawaab kama helin.
“DHAMMAAN Macluumaadka ay bixiyeen wasaaraduhu way khaldan yihiin”
"Waa maxay magacyada ay ku yaalliin warqaddii Kanal Istanbul ee aad u siisay Madaxweynaha?"
Fikradayda, sababaha carqaladeeya cilaaqaadka caafimaadkeenu waa bayaano uu marin-habaabiyay Madaxweynuhu dhinacyada qaarkood. Haddii aad raadiso tusaale; “Imamoglu wuxuu baajiyay metrooga. Ama dhibaatooyin biyo ma lihin. Ama ma jirin dhaqdhaqaaq qarniga hal socod ah oo la xiriira Kanal Istanbul. ” Dhamaan macluumaadka ay siiyeen wasiirradan waa khalad. Waxaan isticmaalaa tibaaxaha culus mana ku haboona. Waxay ahayd warqad sheegeysa in waxaas oo dhami aysan dhicin iyo sida xiriirkaas loo fulin lahaa. Kanaalka ma ahan wax warqad loogu sheegayo. Laakiin waxaan cadeeyay inaan rabo inaan sharxo dhamaan dhibaatooyinka Istanbul waji ka waji.
"Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri," sax maahan in lagu sheego warqadda, waxaa jira waxyaabo kale oo sidoo kale ... "
Horaan u idhi, Horaan u idhi. Dabcan, warqaddu waa mid gaar ah. Wuxuu yiri waa sax. Waxaan fileynaa midka gaarka ah, kulanka gaarka ah: Ekrem İmamoğlu. Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul.
“FARIINTA MADAXWEYNAHA LUUQADAHA LUUQADAHA”
Waxaa jiray warar sheegaya in dad badan, oo ay ku jirto hooyada Amiirka Qadar ay dhul ka iibsatay wadada Canal Istanbul. Haddaba, Madaxweyne Erdogan, 'Run ma ahan in Amiirka Qadar' hooyadii ay iibsatay dhulka; laakiin qaar ka mid ah xubnaha 'CHP' ayaa la sheegay inay ka iibsadeen qol jidkaas. "
Waxaan ku faraxsanahay inaan si sax ah u ogeysiiney Madaxweynaha Jamhuuriyadda. Sababta oo ah wasiirku waxa kale oo uu yidhi ‘Ma jirin dhul la dhaqaaqay’. Laakiin cidda aan ka nimid dhulka, yaa u codeeyay CHP, oo u codeeyay xisbiga AK Party; garan mayno cidda la socota AK Party iyo cidda la socota CHP. Qatar ama wax kaleba aniga ima khusayso. Kirada la dhisay waxaa loo rogay dhaqdhaqaaq shirqool uu qof horay u ogyahay oo garanayo halka laga iibsado Waxaan u maleynayaa in Mudane Madaxweyne ay tahay inuu falanqeeyo. Ma aha cidda xisbiga ka tirsan, waa xisbiga AK Party iyo cidda loo yaqaan 'CHP'.
"Miyaa Khilaafaadka Maxay FUDUD UGU DANBEEYAA Go'aanka ugu wanaagsan ee ah inuu noqdo Goob Cibaadada?"
Shalay, go'aan ka soo baxay baarlamaanka. Codsiga kooxda CHP ee ah in la siiyo meel lagu caabudo Cemevi looma helin mid ku habboon. Go'aanka Cemevleri ee ah inuu ka faa'iideysto nadaafadda iyo adeegyada la midka ah ee lacag la'aanta ah ayaa la sameeyey. Miyaad diidaysaa go'aankan?
Aan idhaahdo tan mar; Dabcan, bal inuu go'aankani gaadho iyo in kale, arrimahani waa waxyaabaha IMM ay ku qaban karto iyada oo amarkiisa ah. Dadka reer Istaanbuul waxay leeyihiin dareen jinni iyo midnimo. Qaabka loo yaqaan '' cemevis '' waa goob lagu cibaadeysto oo noqon kara mid lagu qanco oo ruux ahaaneed sida lagu sheegay sharciga Istanbul sida 'Haa, waa'. Si kale haddii loo dhigo, waxaan doonayay xildhibaanada IMB inay noolaadaan oo dareemaan. Waxaa la yiri, 'Sayidow, muxuu Aamamoğlu u soo diri waayey codsigan?' Goluhu ha sameeyo sidan. Haddii İmamoğlu uu markaa bixiyo, 'Eeg, isagu wuu ku isticmaalaa shaqada. Wuxuu qalab u sameeyaa siyaasada. 'Maanaan sameyn,' Muxuu u sameyn waayey? ' Kuwani waa arrimaha abuuritaanka ajande aad u qosol badan. 'Sayidow, fiqigayaasha ayaa go'aamiya bal in meesha ay tahay meel lagu caabudo' Waa kuwee cilmiga fiqiga? Cilmiga fiqiga ee go'aan qaadashada xiisaha leh? Kuwee? Waxaa sii dheer, sidee bay runti u tahay fiqiga fiqi ahaaneed ee caqiidada go'aaminta aamina kale? Sidee qof kale go'aan uga gaari doonaa qaabka meesha malaayiin muwaadiniin Alevi ah ay u aqbaleen goob cibaado qarniyo? Kuwa tixraaca sharciga ayaa go'aannadaas ka gaadhay dhammaan qaybaha sharciga. Aad ayaan uga xumahay oo aad ayaan uga xumahay wadahadalada. Madaxweyne kuxigeenka kooxda IYI Group wuxuu i xasuusiyay Xadiith aad u qurux badan. Haa, waxaan nahay dad rumeeysan nabi yiri 'dhulka oo dhami waa goob lagu cibaadeysto'. In kasta oo sidan loo samayn karo sidan, aad ayaan uga xumahay labadan qaybood ee aan qaadan karin fursadan. Laakiin waan sii wadi doonaa halganka.
Waqti ayaad arki doontaa…
Nuxurka Waraaqda Imamoglu ee Erdogan
Nuxurka waraaqda Imamoglu
Aagga Dhismaha Waddada Yurub
Warqadda Channel Istanbul
Nuxurka Waraaqda Channel Istanbul